पत्रकार र पत्रकारिता - Sero Fero News
पत्रकार र पत्रकारिता
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - १० असोज २०७५, बुधवार
‘‘नेपाली शब्दसागर अनुसार समाचार सम्पादक, सम्वाददाता, समाचारपत्रमा विविध लेख रचना प्रकाशित गर्ने लेखक, समाचार आदि संकलन गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भनिन्छ ।’’ भने ‘‘पत्रकारको पन वा काम वा व्यवसाय, पत्रकारको सीप र गुणको व्याख्या गर्ने विधालाई पत्रकारिता भनिन्छ ।’’ भनि परिभाषित गरिएको छ ।
पत्रकार र पत्रकारितालाई हामी यस प्रकार प्रष्ट्याउन सक्छौं । अर्थात् शाब्दिक रुपमा पत्रकार र पत्रकारिताको तुलना यसरी गर्न सकिन्छ । नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्, ‘‘पत्रकार आरोपी, समालोचक, सल्लाहकार, बादशाहका प्रतिनिधि र राष्ट्रका सेवक हुन् । चार विरोधी पत्रिकार चार हजार सेनाभन्दा पनि डरलाग्दा हुन्छन् ।’’ यस्तै गरि म्याक नायरले भनेका छन्, पत्रकारिता भनेको पत्रकारले आंकलन गरे अनुसार अस्तित्वमा रहेको वास्तविक संसारको आलेख हो र त्यो आलेख पत्रकारिता निश्चित आवश्यकता अनुसार विशेष माध्यमद्धारा समाजको कुनै भागमा प्रवाहित हुन्छ ।
अंग्रेजीको जर्नलिस्ट भनिने पत्रकार शब्दलाई अझ व्यापीकरण गर्दै विद्युतीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पेशाकर्मीलाई समेट्ने गरी व्यापक अर्थमा पत्रकारलाई सञ्चारकर्मी भनिएको छ । यसैगरी आमसञ्चारका साधनहरुका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ संकलन, प्रशोधन, उत्पादन, भण्डारण र वितरण पत्रकारिता अन्तर्गत पर्दछ । बेलायती पत्रकार माध्यु आनौब्डले पत्रकारितालाई हतारमा लेखिएको साहित्य भनेका छन् । यस अर्थले पत्रकार भनेका परिस्थितिजन्य साहित्यकार हुन् ।
स्थानीयदेखी विश्वव्यापी रुपमै दिनहुँ भैरहेका घटना–दुर्घटना, सूचनाहरुलाई शब्द, आवाज र तस्वीरद्धारा शीघ्रताशीघ्र जनसमक्ष पु¥याउने काम पत्रकारको हो । घटेका घटना तथा उपलब्ध सत्य तथा प्रवृत्ति सवाल र मानिसहरुका सन्दर्भमा सूचना संकलन विश्लेषण, प्रष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण गर्नु नै पत्रकारिता हो । सम्वाददाता, प्रतिनिधि, सम्पादक, पाण्डुलिपी लेखक, व्यङ्ग्य चित्रकार, फोटो पत्रकार, सूचना संकलन र प्रशोधनमा सघाउ पु¥याउने व्यक्ति सबैलाई पत्रकार भनिन्छ । पत्रकारिता भन्नु नै उल्लेखित व्यक्तिहरुले गर्ने समसामयीक ज्ञानको व्यवसाय हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने व्यक्ति नै पत्रकार हो भने उसले गर्ने सामाजिक क्रियाकलापको एक हिस्सा नै पत्रकारिता हो । पत्रकारले आवाज विहिनहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । देशको समालोचक, शिक्षक, पथप्रदर्शक र सल्लाहकारको रुपमा कार्य गर्दछ । पत्रकारिता कला, कर्म र सेवा सबै हो । पत्रकार समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् भने पत्रकारिता समाजको प्रतिष्ठित पेशा हो । सत्यतथ्य सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्नु र सरकारलाई सदैव सकारात्मक र संविधानत कामहरु गर भन्दै घचघचाई रहने कार्य पत्रकारले गर्नुपर्दछ । यसलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । मुलकमा अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारले पत्रकारहहरुको आवाज बन्द गर्न खोजीरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा केहि पत्रकारहरुले सरकारी भाषामै कलम चलाईरहेका छन् । त केही पत्रकारहरुले सरकारको भण्डाफोर गर्न पनि पछि परेका छैनन् । हामी कस्तो पत्रकार बन्ने र कस्तो पत्रकारिता गर्ने अब सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पछिको चौथो अंगका पत्रकारहरुले सरकारको जय जयकार मनाउने की ? सरकारलाई सुअग्रगमनको दिशातर्फ डो¥याउनका लागि घचघच्याउने कर्म गर्ने ? यसको ृउत्तर नेपाली समाज एवं नागरिक समुदायहरुले खोजिरहेका छन् ।